Famaranana ny fitaovana fanamoriana ny fiarovan'ny fiaramanidina China Manufacturer
Description:Famadihana ho an'ny Môtô,Heating Film Defogger,Helis Visor Defogger
Home > Products > Home Appliance Heating Film > Mirror Heating Elements > Famaranana ny fitaovana fanamoriana ny fiarovan&#39;ny fiaramanidina
Ny lamosina fantsom-pandrefesana hafahafa dia mihatra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika andavanandro. Toy ny fitaratra fitaratra mirindra, fitsaboana ara-pahasalamana ho an'ny fiakaran'ny hafanana, faran'ny hafanana hafanana fitsaboana ara-pahasalamana, famokarana fanafody sakafo, famolahana famolavolan'ny fizotran'ny fampielezana, rindrina fanafanana fantsona, fitaovana elektrônika, rafitra fanaterana plastika, ets.
Inona àry ny horonantsary fanalefahana ny taratra Faritra?
Ny filoloha fantsom-pandrefesana hafahafa, fantatra amin'ny anarana amin'ny sarimihetsika fanalefahana, dia fitaovana fanalefahana vaovao ao amin'ny indostrian'ny famokarana. Mamoaka lavitra ny infrareda, mamokatra rivotra mafana amin'ny fampiasana taratra faran'ny hafahafa. Tena maharitra izy io ary mampiasa faran'izay kely kokoa noho ny fomba fanalefahana nentim-paharazana .
Ny sarimihetsika fanalefahana ny riaka be loatra dia efa nampiharina tamin'ny lafiny maro toy ny fitaratra fitaratra, fiara fitaratra fanodinkodinam-bava, showzer freezer, retroreflector ets. Ny injeniera azontsika dia afaka manamboatra fitaovana izay mifanaraka amin'ny fepetra takiantsika. Manana dikan-teny maromaro izay vonona hampiasaina izahay. Tetikasa OEM dia raisina.
4. Toeram-pandehanana fikarakarana fiompiana, fambolena alikaola, fanamafisana ny tany, fikorianan'ny toetr'andro tsy miovaova, fanamainana fiara, fiarandalamby fanindroany, fantsom-panirian-dabozia.
1. Sombiny: 300 ± 3 * 500 ± 5mm
4. Amin'ny PVV dual roa , kareza 2 x 0,75 mm, ny laminy ivelany ivelany 700 mm + 10 -0
6. Ho an'ny sarimihetsika roa farafahakeliny sarimihetsika TSY MPI-TOKONY 0.125, dia tokony hosoloina ny taratasy fanenonan-tongotra roa mitambatra
Famadihana ho an'ny Môtô Heating Film Defogger Helis Visor Defogger Fanafody ho an'ny môtô Sarimihetsika hafanana ho an'ny môtô moto Tendrombohitra hafanana ho an'ny môtô Toeram-pandrosoana ho an'ny UTV Fanamboarana fitaovana ho an'ny motozy